Ozi e nyere na Medjugorje na July 25, 2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na July 25nd 2016
di Paolo Tescione - Julaị 25, 2016
“Ezigbo ụmụaka! Ahurum gi ma ahuru gi furu efu, ma i nweghi ekpere ma o bu onu n’ime obi gi. Latanụ, ụmụntakịrị, kpee ekpere ma debe Chineke n'ọnọdụ mbụ ọ bụghị mmadụ. Echefula olile anya m na-ewetara gị. Mụntakịrị, ka oge a bụrụụrụ ụnụ ụbọchị ọ bụla ịchọ ụnụ n’ime Chineke n’ime nwayọ nke obi gị ma kpee ekpere, kpee ekpere, kpee ekpere rue mgbe ekpere ga-abụ ọńụ nye gị. Daalụ maka ịza oku m kpọrọ.
Nkọwa zuru ezu banyere ụdị nke Queen nke Peace dị na Medjugorje
N'ọtụtụ, na n'ọtụtụ ụzọ, ha jụrụ ndị ọhụụ banyere ọdịdị nke Virgin na ihe na-emekarị na parish nke Medjugorje. Friar Janko Bubalo, onye otu Franciscans nke Herzegovina na nwoke nwere akwụkwọ ozi, gara nke ọma na ihe niile a. O sooro mpụtapụta na Medjugorje site na mbido. Ruo ọtụtụ afọ, ọ bịara Medjugorje ikwupụta ma sikwa otú ahụ nweta ahụmịhe banyere mmụọ mmụọ nke Medjugorje, dị ka ihe ngosi site na mbipụta nke akwụkwọ ya bụ "Otu puku Enwekọ na Virgin na Medjugorje" (1985). O nwetawo mmeri na onyinye n ’ụwa niile. N'akwụkwọ ahụ ọhụụ Vicka na-ekwu maka ahụmịhe ya. Na mgbakwunye na mkparịta ụka a, Friar Janko kwukwara banyere otu isiokwu ahụ na ndị ọhụụ ndị ọzọ. N'ikpeazụ o bipụtara mkparịta ụka ya na Vicka dịka ọ dị ya ka ọ zara ajụjụ ya nke ọma. Echiche nke ndị ọhụụ niile ahụ adịghị iche na nke ya. Dịka e kwuworo, ọ gwala ndị ọhụụ ọtụtụ oge banyere ọdịdị nke Madonna na ọ nweghị ihe e bipụtara nke ha akwadoghị na mbụ.
Oge agafeela ma gbalịsie ike igosi onyinyo nke Virgin ahụ amụbaala. Achọpụtawo ọtụtụ mgbalị ime ihe megidere ihe ndị ọhụụ ahụ kwuru. Iji mee ihe a niile, Fra Janko, n'agbanyeghị afọ ndụ ya (a mụrụ ya na 1913), kpebiri ịmegharị ọzọ. O nyere ndị ọhụụ niile ndepụta nke ajụjụ gbasara ihe oyiyi nke Virgin. Ọtụtụ n'ime ndị ọhụụ ahụ nabatara mbọ Friar Janko (Ivan Dragićević, Vicka Ivanković, Marija Pavlović, Ivanka Ivanković na Mirjana Dragićević). Ha niile degara nzaghachi ha na 23 Julaị 1992. Jakov Čolo azaghị ajụjụ ajuju maka ihe ndị ziri ezi, mana o kwenyere n'ihe ndị ọhụụ ndị ọzọ kwuru na enweghị ihe ha ga-agbakwunye.
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ajụjụ na azịza nke ndị ọhụụ na nkenke.
1. Ihe mbu gwa m: gi onye huru ya n’onwe ya n’ogologo n’adighi eche na Nwa agbadoghi?
Ihe dị ka 165 cm - dịka m. (Vicka)
2. Ọ dị gị ka gị dị gịrịgịrị ka ọ bụ ...?
Ọ dị gịrịgịrị.
3. Ego ole ka ọ nwere ike itu?
Ihe dịka 60 n'arọ.
4. Afọ ole ka ị ga-abụ?
Site na 18 ruo 20.
5. O dikwa agadi mgbe ọ dị n'aka Jizọs Nwatakịrị?
Ọ na-adị ka ọ bụ otu, otu ihe.
6. Mgbe Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nọ ya, ọ na-anọ mgbe niile ma ọ bụ…
Ọ na-adị mgbe niile!
7. Ebee ka ọ dị?
Na obere igwe ojii.
8. Kedu agba bụ igwe ojii a?
Igwe ojii na-acha ọcha.
9. ever hụtụla ya n’ikpere ya?
Mbanụ! (Vicka, Ivan, Ivanka ...)
10. N'ezie gị Madonna nwere ihu. Dị ka? Gburugburu ma ọ bụ elongated - oval?
Ọ dị mma ịnọkarị elu - oval - nkịtị.
11. Kedu agba bụ ihu gị?
Nkịtị - ọ na-acha ọcha ma chara acha na cheeks.
12. Kedu agba dị n’egedege ihu gị?
Nkịtị - na-acha ọcha dịka ihu gị.
13. Kedụ ka egbugbere ọnụ nwanyị na-amaghị nwoke si - na-akụpu ma ọ bụ dị gịrịgịrị?
Nkịtị - mara mma - kama aghụghọ.
Rosate - agba agba.
15. Nwa agbọghọ ahụ enwere akụkụ ya na ihu dị ka ndị ọzọ niile?
Ọ na - abụkarị ọ nweghị - ikekwe ntakịrị oge mgbe ọ mụmụrụ ọnụ ọchị. (Mirjana)
16. normally na-ahụkarị ọchị na ihu gị?
Ikekwe - kama ọ bụ obi ụtọ a na - apụghị ịkọwa akọwa - ịmụmụ ọnụ ọchị dị ka ihe dị n'okpuru anụ ahụ. (Vicka)
17. Gini bu anya ndi Madonna?
Ha dị ebube! Pụrụ iche-acha anụnụ anụnụ. (niile)
18. Nkịtị ma ọ bụ ...?
Nkịtị - ma eleghị anya, ị ga-aba nnukwu. (Marija)
19. Kedụ ka nku anya gị dị?
Nọrọ - adịghị mma.
20. Kedu agba gị nku anya?
Nkịtị - ha abụghị otu agba.
21. Siri ma ọ bụ…
Gulargachi - nkịtị.
22. N’ezie Madonna nwekwara imi. Dị ka? Akọtara ma ọ bụ ...?
Mara mma, obere (Mirjana) - nkịtị, kwesịrị ka ihu ya. (Marija)
23. Na nku anya Madonna?
Anya nku anya siri ike - adighi nma.
24. Kedu ka ejiji gị nke Madonna?
Yiri uwe ụmụ nwanyị dị mfe.
25. Kedu agba gị bụ?
Uwe ahụ na-acha isi awọ - ikekwe obere isi awọ-acha anụnụ anụnụ. (Mirjana)
26. Uwe ahụ na-agbachi ahụ ma ọ bụ daa daa n'efu?
Ọ daa kpamkpam.
27. Kedu ụdị akwa gị ga-aga?
Gaa n'igwe ojii ahụ ọ dị - tufuo igwe ojii.
28. Ma n’ogho n’olu?
Nkịtị - ruo na mmalite nke olu.
29. you hụrụ akụkụ nke olu Virgin?
A na-ahụ olu, ma ọ dịghị ihe ọ bụla hụrụ ya.
30. Ole ebe aka uwe ndi aka di?
31. theji ejiji nwa agbọghọ na-amaghị nwoke?
Ee e, ọ bụghị.
32. Ndụ Madona nwere ihe gbara ya gburugburu?
Onweghị ihe ọ bụla.
33. Ruo n’iru ị hụ, nwanyị nke nwanyị ya apụta n’anwụ ahụ?
N'ezie ee! Ma ọ dịghị ihe ọ bụla akpan akpan. (Vicka)
34. Ndi Vergina nwere ihe ọzọ ma e wezụga uwe ahụ a kọwara?
O nwere ihe mkpuchi n’isi.
35. Kedụ ụdị uwe mkpuchi a?
Ihe mkpuchi ahụ dị ọcha.
36. Agba niile ka ọ bụ ....?
37. Kedụ ihe mkpuchi ahụ kpuchiri?
Ihe mkpuchi ahụ na-ekpuchi isi, ubu na ahụ niile, azụ na hips.
38. Ruo ole mgbe ọ ga-aga gị?
Ruo mgbe ìhè, dị ka uwe.
39. Okwa kedu ka o kpuchie gi?
Ọ na-ekpuchi azụ ya na hips.
40. Ihe mkpuchi yiri ka ọ na-agbanwe agbanwe karịa uwe ndị Virgin?
Mba - ọ dị ka uwe.
41. Enwere okwute dị na ya?
Mba, enweghị ọla.
42. Ọ na-ewughachi?
43. Nwanyị na-amaghị nwoke na-eyi ọla na mma?
44. Iji maa atụ na isi ma ọ bụ n'akụkụ isi ya?
Ee, o nwere okpueze nke kpakpando n’isi ya.
45. you nwere kpakpando mgbe niile n’isi gị?
Nọmalị o nwere - mgbe niile nwere. (Vicka)
46. ​​Ọbụ mgbe ọ pụtara n'ihu Jizọs?
Ọbụna mgbe ahụ.
47. Kedu kpakpando ole gbara ya gburugburu?
Iri na abụọ.
48. Kedu agba ha bụ?
Goolu - ọla edo.
49. Ndi ha di n'otu?
Ejikọtara ha n'ụzọ ụfọdụ - dị ka a ga - asị na ha kwụ otu ebe. (Vicka)
50. you nwere ike ịhụ ntutu isi nke Nwa agbọghọ?
Can nwere ike ịhụ ntutu ụfọdụ.
51. Olee ebe ha huru ibe ha?
Obere karịa n’egedege ihu - n’okpuru veel - n’akụkụ aka ekpe.
52. Kedu agba ha bụ?
53. I nwere ike ihu nti gi?
O nweghi mgbe a hụrụ ha.
54. Kedụ ka ibịa?
Ihe mkpuchi kpuchie ntị ya.
55. Gịnị ka Nwanyị nwanyị anyị na-elekarị anya mgbe a na-atụ egwu?
Na-elekarị anyị anya - oge ụfọdụ ihe ọzọ, ihe ọ na-egosi.
56. Olee otu i si ejide aka?
Ha nweere onwe ha, mepere emepe.
57. Olee mgbe ị ga - emechili aka gị?
Fọrọ nke nta oge - ikekwe mgbe ụfọdụ n’oge “Ebube diri Nna”.
58. Ọ na - agagharị ma ọ bụ nke na - egbu egbu n'oge eserese?
Ejila mmanu mmanu belụsọ ma i gosipụtara ihe.
59. Mgbe aka gị mepere emepe, olee otu esi atụgharị aka gị?
Ọbụ aka na-eche ihu n’elu - aka na-agbatị mkpịsị aka ya.
60. also na-ahụ mbọ mbọ?
Enwere ike ịhụ ha n'otu akụkụ.
61. Kedu ka ha si - ụdị agba?
Agba agba - ọcha dị ọcha.
62. ever hụla ụkwụ Madonna?
Mba - odighi - uwe na-ezo ha.
63. Na ngwụcha, Nwanyị na - amaghị nwanyị mara mma dịka ị kwuru?
N’eziokwu, anyị agwaghị gị ihe ọ bụla gbasara ya - mara nke mara mma - ọ bụghị ịma mma dị ka nke anyị - ọ bụ ihe dị n’eluigwe - ihe dị n’eluigwe - ihe anyị ga-ahụ n’eluigwe naanị - nke a bụ nkọwa dị oke nkenke.